काठमाडौं मेडिकल कलेजका थप १ चिकित्सकमा कोरोना पोजिटिभ - Everest Dainik - News from Nepal
काठमाडौंः सिनामंगलस्थित काठमाडौ मेडिकल कलेजका थप १ चिकित्सकमा कोरोना पोजिटिभ देखिएको छ ।
मेडिकल कलेज प्रमुख डा. चन्दा कार्कीका अनुसार मंगलबार २ जना स्वास्थ्यकर्मी र २ जना बिरामीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको मेडिकल कलेजमा आज १ चिकित्सकमा कोरोना पोजिटिभ देखिएको हो ।
याे पनि पढ्नुस आज कुन जिल्लामा कति कोरोना संक्रमित भेटिए ? (सूचीसहित)
हाल अस्पताल निर्मलीकरणका लागि आकस्मिकसहित सबै सेवा बन्द गरिएको छ ।
अस्पतालमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी, कर्मचारी र उपचाररत बिरामी गरी १ सय ८० जनाको स्वाब संकलन गरेर परीक्षणका लागि पठाइएको डा.कार्कीले उनले बताइन् ।
ट्याग्स: काठमाडौं मेडिकल कलेज, कोरोना भाइरस, चिकित्सक